ရိုဟင်ဂျာအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ မြန်မာအစိုးရကိုဆက်ပြီး ဖိအားပေးနေရမယ်လို့ မလေးရှားအစ္စလာမ် အဖွဲ့များ အကြံပေးကောင်စီ (MCCIO) ရဲ့ ဥက္ကဌက Mohd Azmi Abdul Hamid က ဒီနေ့ တိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှုနဲ့ လူမျိုးရေးသုတ်သင်ရှင်းလင်းမှုတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဥပဒေတွေကို လိုက်နာလာအောင် မြန်မာကိုနိုင်ငံရေးအရ ဖိအားပေးဖို့ မဖြစ်မနေလုပ်ရမယ်လို့ သူကပြောပါတယ်။
ဘောလုံးဟာ မြန်မာ့ကွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့အတွက် မြန်မာအနေနဲ့ အရှိုက်ထိုးခံရသလိုခံစားရမယ်လို့ သူကပြောပါတယ်။
မလေးရှားဟာ အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကြား သဘောတူထားတဲ့ တစ်နိုင်ငံနဲ့တစ်နိုင်ငံပြည်တွင်းရေး ဝင်မစွက်ဘူးဆိုတဲ့ မူဝါဒကိုချိုးဖေါက်ပြီး၊ ရိုဟင်ဂျာအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ ဝန်ကြီးချုပ် နာဂျစ်ရာဇတ် ကိုယ်တိုင် ဆန္ဒပြပွဲမှာဝင်ပါပြီး ပြစ်တင်ရှုတ်ချခဲ့ပါတယ်။
There's no ethnic cleansing to illegal Bengali migrants in Rakhine State, Burma.
Why those Bengalis who told to Medias they were raped and murdered by Burmese Army and Police are coming back to Rakhine state from Bangladesh if their story was true?
Some of International Medias do not publish about the Bengalis killing Bengalis in Rakhine State. Some Bengalis can not prove they were born in Rakhine State or anywhere in the Burma. So these Bengalis and Islamist terrorist group are threatening to Bengali group who were born in Rakhine State to not to return to Rakhine State and murdering the Bengali Village head for co-operating Burmese authority.
Malaysia Prime Minister Mohammad Najib was playing political game with Rakhine problem for his political gain. Burmese Government should not co-operate with anyone who does not respect Burma sovereignty.
Bengali peoples from Bangladesh are still illegally entering into Rakhine State and Chin State. Once they arrived in Burma and then they call themselves Rohingya.
I post some comments about so called Rohingya on RFA but the moderator has never published my comment even thought I never used offensive language. If using term of Bengali for so called Rohingya was offensive language and then RFA moderator should learn about the true identity of those peoples.
Apr 08, 2017 09:34 AM